Ikhalenda yenyanga yokufakelwa kwezityalo zangaphakathi ngonyaka we-2016 - izinto zeMhlaba kunye namanzi ziphambili
Ikhalenda yokutshintshwa kwezityalo zangaphakathi kwi-2016
Ukufakelwa kwe-intanethi kuyimfuneko ekwinkcenkceni yegumbi kungekhona ngaphantsi kokugcoba nokugqoka. Ukuba i-florist iyayilahla, ngoko isityalo, ngokufanelekileyo, asisoze siphumelele ngokukhawuleza. Ewe, ngokugqithiseleyo - ngokukhawuleza kubune. Ngokweqhelekileyo i-chlorophytum, enokuhlala kwindawo efanelekileyo kwiminyaka emininzi, ngokuphindaphindiweyo (kabini ngonyaka) ukutshintshwa komhlaba kumhlaba omtsha uba yintsimi ehle kakhulu enamaqabunga obude beemitha, apho kuba nzima ukuqonda "isicabangca" esaziwayo sisetyenziswe kuyo.
Yiyiphi "iKhalenda yoTshintshiso lweeNdlu zeNdlu" Ikhalenda yeLunar yeeMveliso-2016: Iintsuku ezilungileyo
Ukutyala kwezityalo zangaphakathi ngoJuni 2016 ngokwekhalenda yenyanga
Xa utshintshiselwa, isityalo sityalwa kwindawo entsha, ebanzi enkulu, apho isikhala esingenalutho sigcwele umhlaba omtsha; okanye umhlaba odala ususwe, kubandakanywa ukususela kwiingcambu, kwaye isityalo sitsho kwi-substrate entsha.
Ikhetho lokuqala libizwa ngokuba yi "transshipment", alonakalisi iingcambu, ngoko unako ukuqhuba nayo nayiphi na ixesha.
Ikhalenda yokutshintshwa kwezityalo zangaphakathi ngoJuni 2016
Kwimeko yesibini, imeko ihlukile. Xa i-coma iphukile, izimpande ezincinci ziqwengqeleke kwinani elikhulu kwaye iingcambu ezinkulu zinokupheka. Ukulimala okunjalo kubangela umonakalo omkhulu kwisityalo. Iyabuna, igule, ilahlekelwe ukuhlobisa, ayifaki ingcambu. Akunakwenzeka nakanjani ukuba ingcambu kwaye ibhubhise, xa kwenzeka ukuba amanxeba eengcambu ngaphakathi kweentyatyambo zichaphazela ukusuleleka - ukubola kwebhakteria okanye i-mycelium ye-pathogenic.
Yiyiphi "ikhalenda yokutshintshwa kwezityalo zangaphakathi"
Ikhalenda yeLunar ngo-Apreli 2016 ukwenzela izityalo zangaphakathi
Ngethamsanqa, kukho iintsuku apho izityalo zityalo zilahlekelwa ukunyaniseka kwazo kwaye zincinci. Iingcambu ezilukhuni kunzima ukuphula, ngoko isityalo siya kufumana amanxeba amaninzi xa uphahla. Iintsuku ezinjalo zidibene nesithuba senyanga. Xa inyanga ikhula, i-fluids yesityalo ijolise ekuphezulu kwayo. Emva koko kufika ixesha lokufakelwa.
Ikhalenda yeLunar ngoJuni 2016 izityalo zangaphakathi
Ukufumana ixesha elide kubonakala ukuba kuyimfuneko ukuba ingqalelo nje kuphela isigaba senyanga, kodwa kwakhona kwinqanaba leNyanga. Ukutshintshela kusebenza kakuhle xa i-satellite isisigxina seMhlaba (iTaurus, Virgo, Capricorn) okanye amanzi (umdlavuza, i-Scorpio, i-Pisces). Kwaye abaphumelelanga nonke kwiintsuku apho iNyanga iwuphawu lwe-Aquarius.
Ikhalenda yeLunar yeZityalo-2016: Iintsuku ezilungileyo
Ikhalenda yeLunar ngo-Matshi 2016 ukwenzela izityalo zangaphakathi
Ikhalenda yenyanga yokufakelwa kwezityalo zangaphakathi ngonyaka we-2016 isitshela imihla apho kunokwenzeka ukutshintshela izilwanyana zethu ezifuywayo. Ezi zi:
NgoJanuwari: 27-31 (inyanga ekhulayo eTaurus);
NgoFebruwari - ayikwazi ukutshintshwa;
Matshi: 21-31 (inyanga ekhulayo kwiPisces kunye neCanscer);
NgoMeyi: 19-31 (inyanga ekhulayo eTaurus neVirgo);
Juni - ayikwazi ukutshintshwa;
Julayi: 24-30 (inyanga ekhulayo kwi-Scorpio);
Agasti: 22-28 (inyanga ekhulayo kwi-Scorpio);
NgoSeptemba: 14-20 (inyanga ekhulayo kwiVirgo);
Oktobha: 21-31 (inyanga ekhulayo eKapricorn naseTaurus);
NgoNovemba: 12-18 (inyanga ekhulayo kwi-Scorpio);
NgoDisemba: 18-24 (inyanga ekhulayo kwiPisces).
Ukuba ukhetha usuku lokutshintshwa kwimihlaba emininzi, ngoko iimpawu zomhlaba kufuneka zikhethwe kwiimpawu zamanzi. Kwaye iyona nto ifanelekileyo yokufakelwa kwayo yiNtombi, isimboli sokuzala.
Gxininisa kwiingcebiso ezithunyelwa yiNyanga. Qaphela ikhalenda yenyanga yokutshala izityalo zangaphakathi, awuyi kulahlekelwa yilwanyana elincinane.
Feng Shui kunye nezityalo zangaphakathi
Ukukhula kweClematis nokunyamekela
Imidlalo kunye nokuzonwabisa ngomhla wokuzalwa komntwana
Utamatisi onamathanga kunye neebhunge
Uhlahlo lwabiwo-mali, ulwakhiwo lwalo kunye neendlela zokwandisa
I-Pepper ene-green paste
Indlela yokuxolisa kwintombi yakho
Indlela yokugcina impilo kunye nolutsha?
I-coat ye-Oatmeal kunye ne-nuts and chocolate
Ungasusa njani isikhumba esibi kuminwe?